Zvaunofanira Kuziva NezveTanabata Festivals yeJapan
Izvi zvinoreva tsika iyi kumaJapan
Kana iwe usati wambove kuJapan, iwe ungasave uchiziva Tanabata. Saka, chii chaizvoizvo? Nenzira yakajeka, Tanabata ndiyo tsika dzeJapan umo vanhu vanyorera zvavanoda pane zviduku, zvinyorwa zvinyorwa zvemapepa uye vaturika pamatavi e bamboo. Izwi rechiJapane kune mapepa aya tanzaku. Zvimwewo, vamwe vanhu vanogadzirawo mashizha emasango ane marudzi akasiyana-siyana ezvigadzirwa zvemapepa uye anoaisa kunze kwedzimba dzavo.
Nzira iyo maJapan aifarira ingave yakasiyana, asi tsika dzakasiyana-siyana dzine tsika dzine chokuita nekuchida kuita. MuUnited States nedzimwe nyika dzekuMadokero, kuputsa chido chekudya chekudya, kukanda mapeni mukati mematsime, kubudisa maketani ekuberekwa kana kuti dandelion fluff ndeimwe nzira dzinonzi kuita chido chinouya chechokwadi. Tanabata yakasiyana netsika, asi inowanikwa pasi rose mupfungwa yokuti vanhu vose, zvisinei kuti nyika yavo yakabva kupi, vane tariro uye zviroto kuti zvizadzike.
Zvinonzi iyo yakabva kuTanabata, iyo inozivikanwawo seState Festival, inodzokera shure kudarika makore 2 000 apfuura. Midzi yaro inotsanangurwa mune imwe nyaya yekare yechiChinese. Maererano nenhau, kamwechete paiva nemambo weaaver ainzi Orihime uye mhou yemombe mukuru mukuru ainzi Hikoboshi anogara munzvimbo. Mushure mokunge vaungana, vaitamba nguva dzose ndokutanga kurega basa ravo. Izvi zvakatsamwisa mambo, akazviparadzanisa kumativi akasiyana eAmanogawa River (Milky Way) sechirango.
Mambo akazvidemba uye akabvumira Orihime naHikoboshi kuti vatarane kamwe chete pagore pazuva rechinomwe remwedzi wechinomwe mumwedzi wekutevera. Tanabata chaizvoizvo zvinoreva usiku hwechinomwe. VaJapan vanotenda kuti Orihime naHikoboshi havagone kuona kana mamiriro okunze ari kunaya, saka tsika yekunyengeterera mamiriro okunze akanaka nhasi uyewo kuita zvido.
The Date Inoputika
Nokuti Tanabata yakabva pamarendari emwedzi, apo mutambo wegore unoitika gore negore hunosiyana. Zvichienderana nharaunda iyo inoita mutambo, Tanabata inopembererwa musi waJuly 7 kana Aug. 7 muJapan. Maguta akawanda nemataundi ari munyika anotora Tanabata mhemberero ndokuisa zviratidzo zvakasiyana-siyana mumigwagwa mikuru. Zvinonyanya kunakidza kutenderera kuburikidza nevashambadziri kwenguva refu mumugwagwa. Mune dzimwe nzvimbo, vanhu vanovhenekera mwenje uye vanodzifambisa pamvura. Vamwe vanofambisa mashizha a bamboo parwizi.
Tanabata anopemberera mhando dzakasiyana dzakasiyana-siyana, kusanganisira rudo, zvishuwo, kutamba uye kunaka, zvose pavanenge vachitsanangura mapoka enyeredzi. Kana iwe usingakwanisi kuzviita kuJapan kune mutambo wenyika, unogona kutora chikamu muTanabata munzvimbo dzinozvirumbidza vanhu vakawanda veJapan. Los Angeles, somuenzaniso, imwe yeguta rakadaro. Iyo musha kune imwe nyeredzi yemutambo inoitika munaAugust muTokyo yayo yeChidiki.
Nekuda kupinda muTanabata kune dzimwe nyika hakuzove kwakafanana nekupemberera muJapan, kuita saizvozvo kuchakupa mukana wekuona tsika dzechokwadi dzeJapan pachako.
Rudo Rwakasimba rweJapan rwekuJapan
Nguva Yakanakisisa Yokushanyira Japan?
Zuva Rakapera Dzepasi Pose Dzakawanda Dzakawanda Dhiziyoni
Nzira Yokutaura Sawa muJapan
Anofarira muJapan: Kunwa Doro muJapan
Zvinhu Zvikuru Zvokuita kuMonterey, Carmel uye Pacific Grove
8 Zvinoshamisa McDonald's Zvokudya
Pasipoti DC 2017 (Washington DC Embassy Open Houses)
Auckland Gay Pride Festival muNew Zealand
Top Five Ice Cream Shops muDenver
Zvose NezveVAT Imitero muGreece
Kuparara Kwechishanu kunobata paNyika Street Food Congress
Top Attractions ku Dominica
Kuvhota uye Kudhinda Kubhadhara muAlbuquerque uye Bernalillo County
Chikomborero Chokutenderera Weekend muSouth-East
Zvigumi Neviri Zvakaitika kuHong Kong Iwe Unoda Kuedza
Ndekupi Kwokunyengera kana Kubata muSeattle
Unosangana neDenali: North America's Highest Mountain Peak